Ny lisitra faramparany amin'ireo fanontaniana 30 hanontanianao ny tenanao momba ny fiainana - Blog
Mety ho zavatra sarotra ny fiainana. Dia lavitra hamantarana hoe iza ianao, nahoana ianao, ary iza no tianao hahatongavana.
Ny fanamby dia ny mamantatra ireo zavatra ireo ary mivoatra miaraka amin'izy ireo, satria ireo lafiny amin'ny tenanao ireo dia mety hiova rehefa mihalehibe ianao ary mahazo traikefa bebe kokoa amin'izao tontolo izao.
Ny fiainana sy ny fomba fijery dia afaka miova haingana miankina amin'ny toe-javatra sendra anao. Tena tsy maninona na roapolo na enimpolo ianao.
Ny filentehan'ny tena maha-ianao anao, ny kompas anao anatiny ary izay tadiavinao amin'ny fiainana dia afaka manampy anao hanana fomba fiasa miavaka. Izany fahatsiarovan-tena sy fahatakarana izany dia manampy be dia be rehefa mikatsaka fandriampahalemana sy fahasambarana amin'ny fiainanao ianao.
Ary izany no hanampy anao amin'ity lisitry ny fanontaniana farany momba ny fiainana ity!
1. Afaka mahatsapa fahasambarana ve aho? Oviana ny fotoana farany?
Ny zavatra mahaliana momba ny fahasambarana dia ny tsy fanjakana tsy miovaova tsy tapaka. Amin'ny maha-fihetsem-po anao dia mety ho tonga ny fahasambarana. Tsy misy faly amin'ny fotoana rehetra, fa ny mahatsapa fahasambarana na fahafaham-po na oviana na oviana dia olana tokony horesahina.
Ny tsy fahampian'ny fahatsapana hafaliana na fahafaham-po dia mety hanondro famoizam-po. Raha izany no izy dia tokony hiresaka amin'ny mpitsabo anao ianao.
Ny adin-tsaina be loatra sy ny toe-javatra sarotra amin'ny fiainana dia mety hahatonga azy io hiaina fahasambarana.
2. Misy zavatra azoko atao ve mba hahatonga ahy ho afa-po na olona sambatra kokoa?
Matetika loatra isika dia mijery ireo fanovana ilaina taloha izay mila ataontsika amin'ny fiainantsika mba hitondrantsika tena lehibe kokoa fahasambarana na fahafaham-po .
Mora latsaka anaty rofy rehefa mitoto mandritra ny monotony amin'ny fiainana, na maharaka ny fianakaviana, ny asa na ny fianarana.
Raha tsy mahatsiaro sambatra ianao, misy zavatra azonao havaozina ve ao anatin'ny herinao? Azonao atao ve ny manetsiketsika ny fanaonao na manana traikefa vaovao?
3. Inona avy ireo tanjona azoko apetraka raha tsy faly amin'ilay olona ananako aho izao?
Ny tanjona dia fototra mafy orina hanatsarana ny tena sy hampivelarana ny fahasambaran'ny olona.
Fahita fomba fametrahana tanjona dia ny misafidy fohy (isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana), antonony (enim-bolana ka hatramin'ny herintaona), ary tanjona maharitra (dimy taona, folo taona) hanampy amin'ny famolavolana ny fiainanao sy handrefesana ny fandrosoanao.
Toerana tsara hanombohana dia mikendry ireo faritra amin'ny fiainanao izay mitondra tsy fahasambarana na fihenjanana tsy ilaina.
4. Moa ve mampiady saina be ny fiainako sa feno tantara an-tsehatra?
Ny tsirairay dia tokony handinika ny faritra samihafa amin'ny fiainany mba hahitana hoe iza no miteraka fihenjanana sy tantara an-tsehatra tsy ilaina.
Mety ho izany olona misy poizina fa tafahoatra ianao, asa ratsy miaraka amin'ny sefo sarotra, na olana manokana izay mila ovaina.
Tsy azo atao ny miaina fiainana tsy misy adin-tsaina tanteraka. Hisy ny fisondrotana sy ny fidinan'ny fiainana hatrany. Ny azo atao dia ny manasaraka ny tenanao amin'ireo olona ratsy toetra sy ireo toe-javatra misakana ny mihoatra ny fanampiana.
5. Moa ve mitazona fahatezerana, nenina, na fahatsapana ho meloka azoko avela sy avelako?
Sarotra amin'ny rehetra ny fiainana, na dia mety ho lehibe noho ny hafa aza ny sasany amin'ireo fanamby ireo. Mahasoa ny mijanona sy mandinika ny fahatezerana , manenina, ary ho meloka izay tazominao ary dinihinao raha fotoana tokony hamelana azy ity.
Ireto misy zavatra afaka manaraka ny olona iray amin'ny fiainany iray manontolo raha tsy manao ezaka mavitrika amin'ny fikirakirana ny fihetsem-po izy ireo mba hahafahan'ny fahatsapana hijanona mavesatra be eo an-tsorony.
6. Afaka mampiasa hatsaram-panahy bebe kokoa amin'ireo olona manodidina ahy ve aho?
Ny fihetsika manome hatsaram-panahy dia mahasalama ho an'ny saina sy fanahy. Tsy mila fihetsika lehibe na mahatratra lavitra aza. Ny fanolorana hatsaram-panahy fotsiny amin'ny olon-tianao na ny olona manodidina anao dia afaka manampy amin'ny fananganana fahatsapana fankasitrahana manokana sy FANETREN-TENA .
Mety hisy ihany koa handinika ny fanaovana tanana kely amin'ny asa an-tsitrapo na fanomezana ho an'ny tanjona izay tsapany fatratra.
7. Misy olona manodidina ahy ve mamela ahy ho kivy?
Ny olona dia tsy natao ho eo mandritra ny fiainana. Rehefa mihalehibe isika ary mandroso ny fiainana, ny namana ary na ny fianakaviana aza dia mety hianjera rehefa manaraka ny lalantsika manokana isika rehetra. Indraindray dia ny fandrosoana voajanahary fotsiny ny zavatra izany.
Amin'ny fotoana hafa, mety hiatrika safidy tsy mahafinaritra isika satria ny olona iray izay tiantsika dia miiba tsy tapaka ary manala hery ara-tsaina sy ara-pientanam-po.
Tsy azo atao ny manana fiainana sambatra sy salama rehefa voahodidin'ny olona mandao anao ianao mahatsiaro ritra ary tsy faly.
8. Mahazo fotoana ampy miala amin'ny fitaovana elektronika sy media sosialy ve aho?
Ny haino aman-jery sosialy sy ny fampiasana fitaovana elektronika dia samy izy roa mifamatotra amin'ny fitomboan'ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina anisan'izany ny famoizam-po sy ny fanahiana.
Zava-dehibe tokoa ny fialana tsy tapaka amin'ny elektronika tsy tapaka mba hahazoana antoka fa mahazo fatra mahasalama amin'ny fiainana sisa ny saina. Mila fiaraha-mientana mivantana amin'ny maso sy masoandro ary fanazaran-tena tsy tapaka ny olona mba hahasambatra sy ho salama.
Ny fampiasana ny fitaovana elektronika sy ny haino aman-jery sosialy tompon'andraikitra dia mety hitondra soa lehibe eo amin'ny fiainany, fa ny fampiasana tafahoatra kosa dia mety miteraka olana maro.
9. Manana rafitra miady amin'ny fahasalamana amin'ny alahelo, alahelo na ratram-po amin'ny fiainako ve aho?
Ny fiainana dia manipy antsika traikefa tsara sy ratsy. Ny traikefa tsara dia zavatra iray izay azontsika atao tsotra izao amin'ny fotoana ampandrosoantsika. Ny fatiantoka kosa dia mety mifikitra ary miteraka olana maro amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny kalitaon'ny fiainana.
Ny rafitra miady amin'ny fahasalamana amin'ny fitetezana ny adin-tsaina, ny alahelo, ary ny trauma dia tena ilaina amin'ny fikarakarana tranga ratsy ary mitohy mandroso amin'ny fiainana. Izy ireo dia fahaiza-manao izay hampiasainao mandritra ny androm-piainanao.
10. Moa ve afaka mitia ny tenako amin'ny toetra tsara sy lafy ratsy rehetra aho?
Ianao ve tena tia ny tenanao ? Ny tsara sy ny ratsy rehetra? Ireo rehetra zavatra izay mahatonga anao ho olona tokana misy anao ?
Ny dia ataon'ny fitiavan-tena dia lava sy miolakolaka, saingy mitondra fiadanam-po sy fahasambarana ary fahatokisan-tena izany rehefa afaka manaiky ny sombinao rehetra ianao.
Tian'ireo olona ny milevina ny lafy ratsy ary ialavirany mba tsy handratra azy ireo, fa amin'ny fanaovany izany dia ialany ny fitomboana sy ny fitiavana izay azo avy amin'ny fanasitranana.
11. Moa ve ampahany lehibe amin'ny fiainako ny fananana aina ara-panahy?
Inona no andraikitry ny ara-panahy eo amin'ny fiainanao? Mavitrika ve io? Ny iray passive? Efa nanalavitra ireo zavatra inoanao ara-panahy ve ianao? Ho sambatra kokoa ve ianao na hahatsapa afa-po kokoa amin'ny alàlan'ny famerenana mifanaraka amin'ny zavatra inoanao?
Angamba ianao tsy ara-panahy mihitsy, fa kosa fantaro amin'ny kaody etika na filozofia izay nanjary hazavana mitarika.
Na izany na tsy izany, ny fampifanarahana ny zavatra inoan'ilay olona sy ny fandehanana mankany aminy dia afaka manome fitarihana rehefa misy izany mahatsiaro very ary tsy faly.
Ary na dia tsy olona ara-panahy aza ianao dia afaka manome tombony mitovy amin'izany ny fiverenana mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondrantena ao anatiny.
12. Tokony hampiditra ny zavatra inoanako bebe kokoa amin'ny fiainako ve aho?
Ny rafi-pinoana maro, na ara-panahy na filozofika, dia misy lafiny maro samihafa. Indraindray izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny fiainanao, indraindray tsy izy ireo.
fomba hanampiana olona manana olana amin'ny fifandraisana
Ilaina ny mandany fotoana kely hampifankahalalana ny tena amin'ireo finoana sy hevitra ireo hahitana raha misy zava-baovao azo ampidirina.
Ny olombelona dia nandany an'arivony taona maro hikatsahana fahasambarana sy fahafaham-po. Tsy làlan-kaleha ireo fa mila mandeha irery isika.
13. Nahoana aho no mino sy mahatsapa ireo zavatra ataoko?
“Fa maninona?” dia fanontaniana mahery vaika toy izany. Manampy antsika hamantatra ny antony inoantsika, eritreretintsika ary ataontsika amin'ny fomba ataontsika. Arakaraky ny handinihanao ny antony mahatonga ny zavatra inoanao no hahatakaranao bebe kokoa ny eritreritrao sy ny fahatsapanao.
Ny fahafantarana ny antony dia afaka manampy anao hahita olana alohan'ny hivoarany, hanome anao fifehezana bebe kokoa amin'ny fiainanao, fiadanan-tsaina, fahasambarana ary fiadan-tsaina.
14. Moa ve ny zavatra inoanako mitondra fiadanam-po na fifanoherana lehibe kokoa amiko?
Rehefa mihalehibe isika, dia mety ho hitantsika fa tsy manompo antsika tsara intsony ireo zavatra taloha ninoantsika. Makà fotoana handinihana izay tombony azo avy amin'ny zavatra inoanao amin'ny fiainanao.
Mampilamina anao ve izy ireo? Fampiononana? Fahafaham-bola? Sa misy vokany ratsy eo amin'ny fiainanao izany? Mahatsiaro ho ratsy ianao? Manidy ny fomba fijerinao? Manosika anao hiala amin'ireo olona tianao sy tianao?
15. Zava-dehibe amiko ve ny mandray anjara amin'ny dian'ny zanak'olombelona?
Tsy ny rehetra mila a trailblazer. Betsaka ny olona manolo-tena hiteny sy hijoro ho an'ny fahamarinanao, izay tsy hafatra ratsy amin'ny ankapobeny, fa mety tsy hafatra mety aminao.
Tsy ny rehetra afaka a trailblazer. Tsy ny rehetra no tokony ho mpitondra. Indraindray tsara kokoa ny mahita ny fiadananao manokana na mandeha any aorian'ny olona izay efa mamaky làlana.
16. Inona no andraikitra tokony hataoko amin'izany dia izany? Raha misy?
Raha te hanana andraikitra ianao, ny dingana manaraka dia ny fiezahana hamantatra ny akany. Matetika ny olona dia miforona sy tarihin'ny zavatra niainany. Toerana tsara hanombohana mijery raha misy làlan-kaleha sasany izay misy dikany ho anao sy ny fiainanao.
Betsaka ny olona tsy mahalala ny toerana alehany alohan'ny handehanany amin'ny lalan'ny fiainany. Ara-dalàna izany. Raha ny marina dia mety tsy fantatr'izy ireo fa ny tanjon'izy ireo dia safidy iray mihitsy mandra-pahatongany manomboka mihetsika amin'ny lalana mety.
17. Mahatsapa antso ve aho hanao zavatra izay tsy ataoko?
Ny fahiratan-tsaina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fomba hitondrantsika ny fiainantsika, na dia tsy voatery hanaiky na hahatakatra izany aza isika.
Indraindray isika dia mahatsapa fotsiny fa misy zavatra mety na tsy mety amintsika. Amin'ny fotoana hafa dia mety hisarika mankany zavatra izay tsapantsika fatratra .
Mahatsapa antso ve ianao hanao zavatra tsy nataonao? Ny famaliana antso iray izay tsy raharahinao dia mety hanampy anao hitarika anao amin'ny làlan'ny fahasambarana sy ny fahafaham-po.
18. Moa ve aho miezaka ny ho lasa kinova farany tsara amin'ilay olona mety hahatongavako?
Ny fanatsarana ny tenanao dia momba ny famolavolana ny tenanao ho lasa andiany tsara indrindra ho anao. Betsaka ireo mpampianatra sy boky momba ny fanampian-tena avy any izay maniry ny hisoratan'ny olona ny fomba fisainany, hitovy aminy.
Na dia azonao atao aza ny mampiasa fitaovana hafa ho toy ny fitarihana, ny olona tsirairay dia mila mamantatra ny dikan'ny hoe ny endriny tsara indrindra ho an'ny tenany.
Mety hidika izany fa miasa amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina, mety hidika hoe miasa hanatsara ny fiainany manokana na matihanina. Ny valin'io fanontaniana io dia tsy manam-paharoa toa anao!
19. Mijanona amin'ny faritra amin'ny fiainako tokony hahitako bebe kokoa ve aho?
Betsaka ny olona manafangaro fa tsy miaina zava-dratsy amin'ny tsara. Izany fanandramana tsy miandany sy tsy misy ratsy izany fa tsy misy zavatra tsara no fomba azo antoka mitombo leo sy tsy milamina .
Ny olona izay nanana be dia be teo amin'ny fiainany dia matetika no afangaro ny tsy fahampian'ny tsara na ny ratsy ho zavatra tsara, saingy tsia. Io habaka tsy miandany io dia tsy manome zavatra ilain'ny olona tsirairay - fanatanterahana.
Midika ve izany fa tokony hitsangana handositra ny raviny ho any an-tsaha maitso ny tsirairay? Tsia. Midika izany fa tokony hijerena tsara isika ary hanome antoka fa izay ananantsika amin'ny fiainantsika dia manome tombony tsara izay tsy mijanona amin'ny tsy fiandaniana.
20. Manana sori-dalana ho an'ny fampandrosoana manokana sy matihanina ve aho?
Ny fandrosoana amin'ny fiainam-piainan'ny tena manokana sy ny maha-matihanina azy dia mila tondrozotra mba hahitana ny toerana haleha.
Ny tondrozotra dia tsy ny fametrahana tanjona. Mikasika ny fandrafetana ireo dingana tena izy izay hahatongavanao any amin'ny toerana tianao hisy azy sy ny tokony ho fahita ny faharetan'ny fotoana hahatongavanao. Ny sori-dalana dia mety miasa amin'ny fikolokoloana, asa, sosialy ary drafitra manokana.
Ny fikarohana momba ny fanatanterahana tanjona dia afaka manampy amin'ny fisalasalana sy ny tebiteby ihany koa, satria manana drafitra azo tsapain-tanana eo am-pandraisana ny tanjonao izay azonao averina ianao rehefa misalasala ianao.
21. Inona no manakana ahy tsy hametraka sy hiasa amin'ny tanjoko?
Ny sakana lehibe indrindra atrehin'ny ankamaroan'ny olona dia ny sainy manokana. Ny ati-doha dia mitazona ny zava-tsarotra rehetra, ny tsy fahombiazana ary ny tenin'ireo olona ratsy fanahy izay nanandrana nandrava anay. Sarotra ny manidy ireo eritreritra ratsy ireo ary manosika azy ireo mankany amin'ny fahombiazana.
Indraindray dia mihoatra noho izany. Angamba tsy manana fidirana amin'ireo loharano ilaina ianao na tsy manana fahalalana momba ny fomba hirosoana.
Tokony hijanona ny olona iray hanontany hoe inona no manakana azy ireo tsy handroso mba hahafahan'izy ireo mahita vahaolana amin'izany olana izany ary handroso.
22. Inona no hialako amin'ny fiainako izao?
Ny fisorohana dia mpanimba sy mpamono ny loharano sarobidy indrindra anananao - fotoana. Adiny efatra amby roapolo ihany no azonao isaky ny andronao, ary andro maro ihany amin'ny fiainanao. Raha vao mandalo izy ireo dia lasa.
Mandany fotoana be loatra ny olona hisorohana ny andraikitra sy ny fifanandrinana satria tsy mahazo aina ho azy ireo izany. Ny olana dia ny fandrosoana misy dikany dia tanterahina amin'ny toerana tsy mahazo aina.
Tokony hiezaka ny hifanandrina ny olona ary hanao fiezahana mavitrika handresy ny fanamby fa tsy hisoroka izany.
23. Manana sary an-tsaina ny hoaviko ve aho?
Iza no tadiavinao amin'ny ho avy? Aiza no tianao ahatongavana any aoriana? Ny sarin-tsaina matanjaka momba ny hoavinao dia afaka manampy anao amin'ny drafitra ny làlana mety mankany amin'ny fahombiazana.
Na dia tsy azonao atao aza ny mamaritra ny sary mazava amin'ny ho avy lavitra, dia afaka mikendry ao anatin'ny roa taona manaraka ianao mba handehananao amin'ny lalanao.
24. Moa ve manao izay tena tiako atao amin'ny tenako sy amin'ny fiainako aho?
Matetika ny olona dia tratry ny fanantenan'ny namany, ny fianakaviany ary ny fiaraha-monina misy azy. Tsy voatery hifanojo amin'izay tena mety aminao izany. Tsy misy hafa noho ianao afaka manapa-kevitra ny amin'izay mety indrindra amin'ny fiainanao.
Tokony hijanona ny olona ary haka tahiry tanjon'izy ireo manokana , fiainana ary làlan-kizorana hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny tena tadiavin'izy ireo ho azy ireo zavatra ireo.
Tsy afaka miaina ny nofy sy hetahetan'ny olon-kafa ianao ary manantena ny hahatsapa fifaliana, fahombiazana ary fahafaham-po.
25. Inona no hanampy ahy hahatsapa ho faly amin'ny fiainako?
Ny fanombanana izay tsapan'ny olona iray fa tsy ananany eo amin'ny fiainana dia fomba tsara hanombohana manangana drafitra ho an'ny fifaliana sy fahasambarana bebe kokoa.
Mety tafiditra ao anatin'izany ny fiovan'ny asa, ny fampivelarana ny fifandraisana amin'ny olon-kafa, ny fialana amin'ny toe-javatra mampiady saina, ny fiatrehana ny olana ara-pahasalamana, ny dia, na ny fanovana fotsiny ny fomba fiainana iray.
26. Miaina marina amin'ny tenako sy ny zavatra inoako ary ny soatoaviko ve aho?
Matetika ny olona manodidina azy no mitaona ny olona. Izy io dia mety hahatonga azy ireo hanalavitra ny tena maha izy azy, ny zavatra inoany, ny zavatra lazain'izy ireo ho marina. Mety hiteraka tsy fahazoana aina sy tsy fahasambarana izany.
Mitombo lavitra loatra amin'ny soatoavinao fototra ary mety ho hitanao fa avelanao any aoriana ny ampahany lehibe amin'ny tenanao.
27. Samy hafa ny fahitan'ny olona ahy noho ny fahitako ny tenako?
Na dia ratsy aza ny mamolavola ny tenanao hahatratra ny andrasan'ny olon-kafa, mendrika ny handinihana raha misy tsy fitoviana amin'ny fahitan'ny tena ny tenany manoloana ny fahitan'ny hafa anao.
Ny antony dia ny fifandraisana salama matetika dia mifototra amin'ny fahatokisana sy Communication . Raha misy ny tsy fitoviana dia azo inoana fa manondro fa misy olana amin'ny fahatokisana na ny fifandraisana.
Angamba tsy mahazo aina ilay olona amin'ny maha-tena izy azy. Angamba ny iray na ny iray hafa tsy miresaka mazava hoe iza izy ireo sy ny zavatra andrasan'izy ireo.
Tsy midika izany hoe mila miova ianao mba hahatratrarana ny andrasana, fa mety hanampy amin'ny fametrahana fahatokisana bebe kokoa sy fifandraisana izay hanome tombony tsara amin'ny fiainanao.
28. Moa ve aho milaza ireo zavatra tokony holazaina?
Misy fotoana tokony hipetrahana ary tsy hanginana. Ny fisorohana ny resaka tsy maintsy hitranga dia lalana haingana mankany amin'ny fifandraisana tsy mahomby sy ny tsy fahasambarana.
Betsaka ny olona manalavitra resaka tsy mahazo aina satria tsy te hitoraka ny sambo na ho hitan'izy ireo ho olon-dratsy.
Indraindray ianao dia mila manao vivery ny ainy. Indraindray dia mila ady hevitra ny hahatongavany amin'ny farany fahamarinana ary hizaha vahaolana mety.
29. Manana fetra matanjaka ve aho mba hitoerako salama sy hanatanterahako ny tanjoko?
Mety ho sarotra ny olona. Masiaka izy ireo ary mahasosotra, indraindray tsy mangoraka sy tsy tsara fanahy.
Indraindray koa dia olona antsointsika hoe namana sy mpianakavy izy ireo. Angamba izy ireo tsy manolotra karazana fanohanana na hatsaram-panahy izay antenainay fa hatolotr'izy ireo.
Na dia tsara aza raha miezaka ny ho tsara fanahy kokoa na hahatakatra bebe kokoa ny olona dia tsy zavatra tokony ampoizintsika izany. Ny fivoaran'ny tena manokana amin'ny fari-tanin'ny tena dia manamora ny fanesorana ny negativa, ny fitehirizana ny fahasalamana ara-tsaina ary ny handrosoana hatrany.
30. Ho faly sy afa-po amin'ny fiainako ve aho raha hifarana rahampitso izao tontolo izao?
Faly sy afa-po amin'ny fomba niainanao ny fiainanao ve ianao? Zavatra azonao jerena amin'ny avonavona sy fifaliana ve izany?
Sarotra ny fiainana ary samy manao fahadisoana maharary isika indraindray. Saingy tsy tara loatra ny manomboka miaina fiainana tsaratsara kokoa ary mamela marika tsara eo amin'izao tontolo izao !
Aza avela hamaritra ny ho avinao ny lasa. Afaka ny ho tsara kokoa sy sambatra ary ho tsara fanahy kokoa isika rehetra!
rehefa misy lehilahy te hiara-matory aminao fotsiny
wwe lalao baolina matanjaka be